JUSTICE ET PAIX : « Efa misy fiovana ny fiainan’ny Malagasyary hita mivaingana ny ezaka atao »
Efa misy fiovana ny fiainam-bahoaka ary hita mivaingana ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana. Io no tombana noentin’ny teo anivon’ny fikambanana « Justice et Paix » na ny fahamarinana sy ny fiadanana raha nanao jery todiky ny fiainam-pirenena tamin’iny taona 2019 lasa iny izy ireo. 22 janvier 2020
Herintaona katroka tamin’ny alahady 19 janoary lasa teo no nandraisan’ny Filoham-pirenena ny fahefana feno amin’ny fitantanana ny firenena. Nanao tomban’ezaky ny fiainam-bahoaka tao anatin’izay herintaona nitsanganan’ny fitondrana vaovao izay ny fikambanana « Justice et Paix ». Ity farany izay rantsana manokana manara-maso akaiky ny fiainam-pirenena eo anivon’ny fiangonana Katolika. Nilaza ny « Justice et Paix » tao anatin’ny tatitra nataony fa tena manao ezaka lehibe amin’ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka ny fitondram-panjakana.
Efa hita, hoy izy ireo, fa miova tsy toy ny tany aloha ny fiainan’ny Malagasy raha tamin’iny taona 2019 iny no asiana tombana. Manasongadina ity fikambanana ity fa tena miasa ny fanjakana ary mijery manokana ny lafiny ara-tsosialin’ny vahoaka indrindra fa ny fandriam-pahalemana. « Raha ny tatitra natao nandritra izay andro vitsivitsy izay dia samy mahatsapa fa misy fiovana ny zavatra sasantsasany. Hita fa efa manomboka miha mihena tsikelikely ny tsy fandriam-pahalemana », hoy ny fanazavana noentin’ny Mompera Sata Jean Noel Andrianasolo, sekretera jeneralin’ny Justice et Paix. Nambarany ihany koa fa anisany tena nampiavaka an’iny taona nivalona iny ny fanatanterahana ireo fifidianana nifanesy teto amin’ny firenena. Nanamafy ny fikambanana fahamarinana sy fiadanana fa efa manangasanga ny fipoahan’ny masoandrom-panantenana ho an’ny vahoaka malagasy. Efa betsaka ireo ezaka ataon’ny mpitondra ankehitriny.
Na izany aza anefa dia nilaza izy ireo fa mbola misy ihany ireo sehatra mbola anjakan’ny fahalovana ka ilaina fanabeazana mafy orina. « Hita fa tena misy ny fivoarana saingy mbola misy ihany ireo karazana fahalovana izay mbola raiki-tampisaka ka ilaina fiovana lalina sy ilaina fanabeazana tena izy », hoy hatrany ny voalaza. Nilaza ny tompon’andraikitra fa hiezaka izy ireo hanampy ny fitondram-panjakana amin’ny fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanona. Anisan’izany, ohatra, ny fanomezana ny kopian’ny soram-piankohonana ho an’izay mbola tsy manana izany.
Rangahy manodidina ny 40 taona tratram-badiny nanolana zaza valo taona TOAMASINA (130) 28 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (99) 26 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (98) 26 mai 2020 Sarona ireo jiolahy roa nahafaty mpanampy an-trano FANAFIHANA TRANONA MPITANDRO FILAMINANA (73) 28 mai 2020 Sarona ireo jiolahy roa nahafaty mpanampy an-trano FANAFIHANA TRANONA MPITANDRO FILAMINANA (63) 28 mai 2020 Nirefodrefotra ny basy teny Ampanefy, jiolahy 3 azo sambo-belona FANAFIHANA (56) 26 mai 2020